ဗန်းမော်…ဆိုတာ….. – PoemsCorner
Leave comment7Comments & 423 views
By: minthu at Jun 18, 2010
း) poem corner ထဲမှာ ဆုံဖြစ်နေမှာပဲ…။
ကဗျာချစ်တဲ့မောင်နှမတွေအားလုံး ခင်ခင်မင်မင်ပေါ့ 😀
By: John Moe Eain at Jun 18, 2010
nice to meet you as i m also from Kachin State,Mogaung.
i miss my hometown too.
By: kyi kyi at Jun 21, 2010
Hello! I am Kachin State. Nice to meet you .Thanks
Hi..ကိုယ်လဲ ဗန်းမော်မှာ နေခဲ့ပါတယ် ဒကာတော်..မင်းရဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့.ကိုယ်ပြန်ပြီး ဗန်းမော်နယ်လေးကို လွမ်းမိပါတယ်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မြတ်လင်းပါ။ ခင်မင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ mail address ([email protected]) ကို reply ပြန်
By: fang rui zhong at Aug 14, 2010
By: မြင့်မြတ် at Jun 19, 2011